BAAR-SANGUUNI, Soomaaliya – Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa maanta gaarey deegaanka Baar-Sanguuni, ee duleedka Kismaayo, halkaasi oo tan iyo Jimcihii ay ka dhaceen labo weerar.
Wararka ayaa sheegaya ujeedka safarka Axmed Madoobe uu yahay inuu u kuurgalo xaaladda amni ee deegaan iyo inuu niyad-dhis u sameeyo Ciidanka ku sugan deegaanka ee la kulmay weerarada Al-Shabaab.
Dagaal culus oo u dhexeeya Ciidamada dowladda, kuwa Jubbaland oo isku dhinac ah iyo Al-shabaab ayaa maanta ka dhacay Tuulada oo qiyaastii 45-KM dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.
Al-shabaab ayaa xalay la wareegtay deegaanka, markii ay isaga baxeen Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo Jimcihii lasoo weeraray lagana dilay Askari American ah, 4 kalena looga dhaawacay.
Axmed Madoobe ayaa kulamo kula leh deegaanka Saraakiisha Ciidamada kala duwan, isagoo ku dhiiragelinaya inay ku sugnaadaan saldhigyadooda, oo aysan fursad u siinin Al-Shabaab markale inay la wareegto.
Maamulka Jubbaland ayaa tan iyo markii la dhisay 2013 awoodi waayay inuu Al-Shabaab ka saaro deegaanada ku teedsan magaalada Kismaayo, iyadoo uu taageero ka helayo Ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Mareykanka iyo Kenya.